Redmi Note 4g Global/ China Rom 6.3.5.0 /Update /Root /Mmfont သွင်းနည်း
Posted by Fros on April 23, 2015
redmi note4g global/china rom 6.3.5.0
rom ရှိပီးသူများ ဒေါင်းရန်မလိုပါ…
cwm recovery ကို အရင်ဆုံး updater ကနေ flash ရပါမယ်… ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ updater>select update package>choose cwm recovery ကို folder ထဲကနေ ရွေးပေးလိုက်ပီး တင်ပါ….
တကယ်လို့ ဒီနည်းနဲ့ မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ recovery mode ကိုဝင်ပီး install update.zip from sd card ဆိုတာနဲ့ flash လုပ်ရပါမယ်… အဲဒီ့လိုလုပ်ဖို့က ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင်ကို update.zip လို့ နာမည်ပြောင်းပီး ဘယ်ဖိုဒါထဲမှမထည့်ဘဲ အပြင်ဘက်မှာထားပါ…ဒါမှ တင်ရင် အဆင်ပြေပါမယ်…
reboot ပြန်တက်လာပီဆိုရင် supersu.apk ကို install လုပ်ပါ.. ပီးရင် အထဲကိုဝင်ပီး update လုပ်မလားမေးရင် လုပ်ပေးလိုက်ပါ…. reboot ပြန်တက်လာရင် အိုကေပါပီ…
g730 mmfont changer (with root): http://www.mediafire.com/download/qjwn9cbyw21zrdi
ဒီချိန်ချာက သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ် reboot ကျပီး ပြန်တက်လာလို့ logo မှာ အတော်ကြာကြာရပ်နေမယ်ဆိုရင် ဘတ်ထရီဖြုတ်ပီး ခနထား ပီးရင် ပြန်တပ်ပီး သုံးလိုက် အားလုံးအိုကေပါတယ်…
(global rom သမားများကတော့ ဒီအဆင့်ကို လုပ်ရန် မလိုတော့ပါ…)
china rom ဖြစ်တဲ့အတွက် google service တွေ မပါပါဘူး ဒါကြောင့် mi market>google installer ကိုဒေါင်းပီး အရင်ဆုံး playstore ကို install လုပ်ပါ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဓိကလိုတာကလည်း ဒီတစ်ခုတည်းဖြစ်နေလို့ပါ ပီးတော့ အဲဒီ့ကနေ ဒေါင်းရင် update ပြန်ပြန်ပီး လုပ်ပေးနေရတာမို့ playstore ရပီဆိုမှ အဲဒီ့ကနေ ဒေါင်းပါ.. လောလောဆယ် ခုနက နေရာက ပြန်ဆက်မယ်.... page တခုတက်လာမယ်...အဲဒီ့ထဲမှာ google framework, acc sync နဲ့ အားလုံးပေါင်း4file မြင်ရမယ် အောက်ဆုံးမှာ ဖုန်းပုံလေးရှိတယ် အဲဒါလေးကို နှိပ်ပီး အင်စတောလုပ်လိုက်ပါ... google playstore ကို homepage မှာ မြင်ရပီဆို အိုကေပါပီ..... အောက်ကလင့်မှလည်း ဒေါင်းပီး တင်နိုင်ပါတယ်ဗျ…
အောက် ကလင့် ကိုသုံးဖို့ cwm or twrp recovery က နေ install zip now ကို ရွေးပီး ဒေါင်းထားတဲ့ ဖိုင် လေးကို ရွေးပါ.. သွင်းပီးရင် reboot now လုပ် ပါ.. ပီးရင် 1mobile market လိုနေရာကနေ ပီးတော့ google play service ကို update လုပ်ပေးလိုက်ပီး reboot ချ ပြန်တက်လာရင် ရပါပီ
အောက်က ဖိုင်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ cwm recovery လိုပါတယ်.. အဲဒီ့ကနေပီး ဒီဖိုင်လေးကို install လုပ်ပါ... ပီးရင် reboot now လုပ်ပါ ပြန်တက်လာရင် playstore ကို home page မှာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်.........
Gapps. 4.4.x >>> http://www.mediafire.com/download/pa4d2vpwcp6vi38/4.4.X-GAPPS.zip
Credit to Tin Htay Aung from Myanmar Mi Fan facebook group
General Knowledge Phone Xiao Mi
ဖီးနစ် သို့ မီးငှက်
ဖီးနစ် သို့ မီးငှက် (၁)
မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်းတွင် ရှေးနှစ်ပေါင်း (၁.၇ သန်း) မှစ၍ လူသား မျိုးနွယ်စုများ နေထိုင်ခဲ့သော နိုင်ငံတစ်ခု ရှိပါသည်၊ သမိုင်း မှတ်တမ်းကို (ဘီစီ ၂၂ ရာစု) ထဲက တွေ့ရ၏၊ ရှေးနှစ်လေးထောင် ကပင် အဆင့်မြင့် ပိုးထည် ရက်လုပ်တတ်သည်၊ နှစ် ၃၅၀၀ ကျော်ထဲက ကြေးသွန်းနှင့် ကြွေထည် လုပ်ငန်း တတ်မြောက်သည်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ပညာများ ထွန်းကား၏၊ ရေအား စွမ်းအင်၊ ရေနာရီ၊ လေရဟတ်၊ ယမ်း နှင့် ပုံနှိပ် အတတ်များ ကို စောစီးစွာ တတ်မြောက်ခဲ့၏၊ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု နှင့် နည်းပညာ ရှေ့ဆောင်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ဟင်းခတ် အမွေးအကြိုင်၊ ကြွေထည် နှင့် ပိုးထည် များကို အနောက် ကမ္ဘာက မက်မောစွာ ကုန်သွယ် ခဲ့ရ၏၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဆေးပညာ၊ စစ်ပညာ နှင့် နက္ခတ္တဗေဒများ တဘက် ကမ်းခတ် ထွန်းကားခဲ့သည်၊ ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ် မဟာတံတိုင်း တည်ဆောက်ခဲ့သည်၊ ၁၈ ရာစုက ဗြိတိသျှတို့ တည်ဆောက်ခဲ့သော သင်္ဘော များထက် သုံးဆကြီးသော သစ်သား သင်္ဘောကို ၁၅ ရာစု ကပင် ဆောက်လုပ် နိုင်ခဲ့သည်၊ (Treasure) ရတနာ အမည်ရှိ သင်္ဘောသည် တန်ချိန် ၇၀၀၀ ရှိပြီး နောင် နှစ်လေးရာ ကြာမှ အလားတူ သင်္ဘောမျိုးကို ကမ္ဘာက ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ စာဖတျမရလြှငျ ဒီကိုနှိပျ…
ဟိုမရောက် ဒီမရောက် စာပေ
မောင်ပွ သည် ငယ်စဉ်က စာ အလွန် တော်သော ချစ်စဖွယ် ကလေးငယ် ဖြစ်သည်။ ရိုးသား ကြိုးစား လိမ်မာ ယဉ်ကျေး သဖြင့် ဆရာမ များ က လွန်စွာ ချစ် ကြလေ၏။ ထိုကဲ့ သို့ မထင်လိုက်ကြပါနှင့်။ အထက်ပါ စာကြောင်းများအား ပြောင်းပြန် တွေးလိုက်ပါက မောင်ပွ၏ အခြေ အနေ မှန် များပင် ဖြစ်သည်။ တစ်ခါက ဆရာမ ထိုင်ခုံပေါ်တွင် ပီကေ သွားကပ်သဖြင့် ကျောင်းအုပ်ကြီး ရုံးခန်း ရောက်သွားဖူးသည်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးကို စောင့်နေစဉ် ကျောင်းအုပ်ကြီး ခုံပေါ်မှ ငှက်ပျောသီး ကိုခိုးစားလိုက်သေး။ ကျောင်းအုပ်ကြီးက မိဘ ခေါ်ကာ ကျောင်းမှ ၂ပတ် ခန့် အနားပေး တာခံခဲ့ရဖူးသည်။ ၁၀ တန်းတုန်းက အေ အခန်းမှ ငါးခုံးမ လေးကောင်ဆိုပြီး ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် နာမည် ကြီးလိုက်သေးသည်။ အချင်းချင်း ကိုလည်း စတာ မှ ဟိုဘက်က ထထိုးတဲ့ အထိ စခဲ့ဖူးသည်။ ထိုသူမှာ စလည်း စချင်စရာ။ မှတ်မှတ် ရရ ၆တန်း စတက်သောနေ့တွင် ဖြစ်သည်။ ထိုကျောင်းသားမှာ ကျောင်းနောက်ကျနေလေ၏်။ ကျန်တဲ့ သူတွေက အခန်းထဲ ရောက်လို့ ဆရာမက နာမည်တောင်ခေါ်နေသော အချိန် ကျမှ ထိုကျောင်းသား နှင့် သူ၏ အမေ ရောက်လာလေသည်။
“ ဆရာမ ၀င်ခွင့်ပြုပါ”
“ အော် ၀င်ပါ ၀င်ပါ ကလေး အမေလည်း ပါလာတာကိုး”
“ ဒါထက် ကလေး နာမည်က ဘယ်သူ”
God of War (PS4 Guide) မကစားခင် သိထားသင့်သော အချက်များ
God of War ဂိမ်းအသစ် ဒီနေ့ ထွက်ပြီ ။ PS4 သမားတွေတော့ ကစားဖို့ တပြင်ပြင်နဲ့ပေါ့ ။
အခု ထွက်တဲ့ God of War ဂိမ်းကတော့ အရင့်အရင် စီးရီးတွေနဲ့မတူ အတော်လေး ကွဲပြားသွားပါပြီ ။ ပြန်လည် ဆန်းသစ်ထားတဲ့ combat အသစ်၊ ဇာတ်လမ်းအသစ်နှင့် feature အသစ်၊ mechanic အသစ်တွေနဲ့ မို့ God of War ဖန်ဟောင်းတွေတောင်မှ တခါတလေ မျက်စိလည်သွားစေမယ့် ဂိမ်းတစ်ခုပါ ။
ဒါကြောင့် မကစားခင်မှာ သိထားသင့်တာလေးတွေ ဖတ်ထားရင် ကစားတဲ့အခါ အထစ်အငေါ့မရှိ ပိုပြီး ကစားရကောင်းသွားမှာမို့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေ စုစည်းပြီး ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ် ။ စုစုပေါင်း အချက် ၁၁ ချက်ရှိပါတယ် ။ စာဖတျမရလြှငျ ဒီကိုနှိပျပါ
1> Optional Area တွေကို အချိန်ယူပြီး စူးစမ်းလေ့လာ သွားလာပါ
အခုထွက်ရှိထားတဲ့ God of War ဟာဆိုရင် သူ့အရင် စီးရီးတွေနဲ့ လုံးဝမတူပဲ ဂိမ်းတည်ဆောက်ပုံက ကွဲပြားနေပါတယ် ။ ဂိမ်းအစပိုင်းမှာတော့ linear ဖြစ်လို့ ဒီနေရာသွား ဒီနေရာလာ စသဖြင့် ဇာတ်လမ်းအရ သွားခိုင်းတဲ့နေရာကလွဲလို့ တခြားနေရာတွေ သွားလို့မရအောင် ကန့်သတ်ထားပေမယ့် Lake of Nine ကို ရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ optional area တွေအများကြီး တွေ့လာရမှာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ် ကြိုက်သလို ကြိုက်တဲ့နေရာက…
Tenka Haruka ni Koete Lyrics
With Kanji, Romanji and English translation
Tenka Haruka ni Koete (天下遙かに越えて) isaSamurai Warriors character image song. It'sasolo song performed by Nobuyuki Hiyama for one of his characters in the series, Masamune Date.
Moving forward, forward, forward, moving ever onward
Sakiesakiesakiesusume dokomade mo tsuki susume
No one can ever oppose my will
Kokorozashi wa dare mo habamenu
I’ll win, I’ll win, I’ll come from behind, never stopping, never looking back
Katte katte kachimakutte todomarazu furi mukazu
Crossing to that faraway land, looking ever forward
Tenka haruka ni koete sara ni sono saki wo miru
တစ်ဧက = ၄၃၅၆၀ စတုရန်းပေ
လေးနားညီ စတုရန်း= လျား ၂၀၈.၇၁ ပေ x နံ ၂၀၈.၇၁ ပေ။
နှစ်နားညီ စတုဂံ = လျားxနံ ÷ 43560
နှစ်နားပြိုင် တြာဗီဇီယံ = ပြိုင်နား နှစ်ခုပေါင်း ÷၂ x နံ ÷ 43560
တြိဂံ = .၅xအခြေxအမြင့် ÷ 43560
တြိဂံ = ½ အခြေxအမြင့် ÷ 43560
ထောင့်မှန် တြိဂံ - အခြေxအမြင့် = ရလာဒ် ÷ ၂ ÷ 43560
စက်ဝိုင်း - အချင်းဝက်x အချင်းဝက်x 3.1416 ÷ 43560
စက်ဝိုင်း - အချင်းxအချင်းx .၇၈၅၄ ÷ 43560
ပုံသေ မြှောက်ကိန်း .၇၈၅၄
.၇၈၅၄ သည် ပိုင်ကိန်း ၃.၁၄၁၆ ကို (အနားလေးဖက်) ၄ နှင့်စားပြီး စတုရန်းကွက် ဖေါ်သည်။
အနားငါးမျက်နှာ ၆မျက်နှာနှင့် အနားများစွာ = စတုဂံ စတုရန်း တြိဂံစသည် အကွက်စိပ် ပြီးတွက် ရလာဒ်အားလုံးကိုပေါင်း၍ ၄၃၅၆၀ ဖြင့်စား။
*** ခြံမြေကွက်အကျယ်အဝန်းအရ စိုက်ပင် တွက်နည်း
( ဒေါက်တာချစ် စိုက်ပျိုးရေး စာအုပ်မှ…. )
(၁) လျား x နံ ရှိ စိုက်ပင် အရေအတွက်ကို မြှောက်။
(၂) ခြံကွက်၏ လျား x နံ မြှောက်ကိန်း ÷ ပင်ခြား ကွာဝေးမြှောက်ကိန်း
မြေကွက် လျား ၃၀၀ x နံ၂၀၀ = ၆၀၀၀၀ စတုရန်းပေ
သစ်ပင် ၁၂ ပေခြား စိုက်လျှင် ၁၂ x ၁၂ = ၁၄၄
၆၀၀၀၀ ÷ ၁၄၄ = ၄၁၆ ပင်
ဖိုခနောက်ဆိုင်စိုက်လျှင် ၁၅% အပိုထွက်မည် ၄၁၆ x .၁၅ = ၆၂
၄၁၆ + ၆၂= ၄၇၈ ပင်
( ၃) ဧကပြည့် ( ၁ ဧက ) တွက်လျှင်
Bitcoin နှင့် ပုံတူ coin များ အကြောင်း
Crypto Currency ဖြစ်ကြတဲ့ Bitcoin/Litecoin/Dogecoin အစရှိတဲ့ Currency တွေအကြောင်း အကျဉ်းချုံး ရှင်းလင်းချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးရဲ့ ရည်ရွယ်ရင်းဟာ ဒီ Crypto Currency တွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ မသင့်တော်တဲ့အပြင် ဥပဒေနဲ့ငြိစွန်းကြောင်း အသိပေးလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဆောင်းပါးကို Crypto Currency ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ Page များ၊ Group များမှာသော်၎င်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီသော်၎င်း ဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကို ဖော်ပြပြီး အခမဲ့ လွတ်လပ်စွာ မျှဝေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပဲ မိမိလိုသလို ပုံဖျက်ကာ ဖြတ်တောက်ကူးယူခြင်းကိုသော်၎င်း၊ Crypto Currency ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ တစ်နည်းနည်းဖြင့် အသုံးချခြင်း၊ လက်လွှဲခြင်းတို့ကို မြှင့်တင်ရန်၊ ကြော်ငြာရန်အတွက် အသုံးပြုခြင်းကိုသော်၎င်း လုံးဝ(လုံးဝ) ခွင့်မပြုတဲ့အပြင် တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ပါက တည်ဆဲမူပိုင်ခွင့် ဥပဒေများနဲ့အညီ တရားစွဲဆိုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Crypto Currency နောက်ခံသမိုင်း၊ အလုပ်လုပ်ပုံ၊ အနာဂတ်အလားအလာ : ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတို့ လက်ရှောင်နေသင့်သည့် အကြောင်းအရင်း
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဘ၀လမ်းခရီးတစ်လျှောက်မှာ
သူများအပေါ် ကောင်းတတ်ခြင်းဟာ ခရီးဝေးဝေး ပိုပေါက်မြောက်စေတယ်။
ကိုယ့်အပေါ် ကောင်းတတ်ခြင်းဟာ ဘ၀ကို ပိုမိုစိုပြေစေပါတယ်။
အမှန်တော့ ဘယ်သူ့အပေါ် ပဲကောင်းကောင်း၊
အချစ်ကိုဆန့်ထုတ်ခြင်းပါ။ နွေးထွေးမှု ကို ကူးစက်စေခြင်းပါ။
သူများကို အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတယ်။ ကိုယ်လည်း စိတ်ချမ်းသာတယ်။
သူများအပေါ် ကောင်းတတ်ဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်။
ကိုယ်က အဆင်ပြေနေတော့၊ သဘောကောင်းရတယ်။ နိမ့်ချတတ်ရတယ်။
အနည်းဆုံးတော့ မ၀င့်ဝါမိဖို့၊ မကြွားဝါမိဖို့၊
အထက်စီး မနေမိဖို့ ဆင်ခြင်ရပါမယ်။
ဒီနေရာမှာ ကောင်းတယ်ဆိုတာ ရင်းနှီးလွယ်တဲ့သဘော၊
ပြစ်တင်မှုထက် ခွင့်လွတ်မှုကို လျင်မြန်စေတဲ့ သဘော၊
တုန့်ပြန်မှုထက် လျစ်လျူရှု့မှုကို အမြဲဦးစားပေးတဲ့သဘော၊
သင့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့လူတွေ သင့်ချမ်းသာတဲ့ဒဏ်ကို မခံစားမိစေဘူး၊
Final Fantasy စီးရီးနှင့် ပတ်သက်သော application များ
Square Enix ဂိမ်းကုမ္ပဏီကတော့ RPG တွေနဲ့ ကျော်ကြားနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ ။ လူသိအများဆုံး RPG တွေဖြစ်တဲ့ Final Fantasy စီးရီးတို့ Dragon Quest စီးရီး Kingdom Hearts စီးရီးတို့ဆို Square Enix ရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး ဂိမ်းစီးရီးတွေပါပဲ ။ Square Enix ကဂိမ်းတွေက အများအားဖြင့် PlayStation အတွက်ပဲ ထွက်လေ့ရှိတာပါ။ ခေတ်ကြီးတွေက ပြောင်းလာတော့ Square Enix က ဂိမ်းတွေဟာ ဒီတစ်နှစ် ၂ နှစ်အတွင်း PC အတွက်ထွက်လာတာ များလာသလို Mobile ဖြစ်တဲ့ iOS နှင့် Android အတွက်ထွက်လာတာ များလာတာကို တွေ့ရတယ် ။ ဒါနဲ့ iOS နှင့် Android အတွက် ထွက်ခဲ့တဲ့ Final Fantasy စီးရီးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ application တွေ ဘယ်လောက်များလဲ သိချင်လို့ လိုက်ရှာစုစည်းကြည့်မိတယ် ။ ဒီ post လေးကတော့ ရှာတွေ့ရသမျှကို စုစည်းထားတာဖြစ်ပါတယ် ။
(Unicode) Square Enix ဂိမျးကုမ်ပဏီကတော့ RPG တှနေဲ့ ကြျောကွားနတေဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခုပါ ။ လူသိအမြားဆုံး RPG တှဖွေဈတဲ့ Final Fantasy စီးရီးတို့ Dragon Quest စီးရီး Kingdom Hearts စီးရီးတို့ဆို Square Enix ရဲ့ နာမညျအကွီးဆုံး ဂိမျးစီးရီးတှပေါပဲ ။ Square Enix ကဂိမျးတှကေ အမြားအားဖွငျ့ PlayStation အတှကျပဲ ထှကျလရှေိ့တာပါ။ ခတျေကွီးတှကေ ပွ…